१० बर्षमा १ हजार थान मेसिन बिक्री गर्न सफल भयौ | Automotive News Nepal
१० बर्षमा १ हजार थान मेसिन बिक्री गर्न सफल भयौ २७ फागुन, २०७६
राजेन्द्र कार्की सिप्रदी ट्रेडिङमा विगत १४ वर्ष देखि र सिप्रदी अर्थमुभर्समा विगत ११ वर्ष देखि कार्यरत छन् । २००९ मा सिप्रदी अर्थमुभर्स स्थापना भए पश्चात नै उनी सिप्रदी अर्थमुभर्समा कार्यरत छन् । सिप्रदी अर्थमुभर्सले टाटा हिटाचीका हेभी इक्विपमेन्ट नेपाली बजारमा बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कार्कीसँग गरिएको कुराकानी :
हेभी इक्विपमेन्टको पछिल्लो बजार अस्था कस्तो छ ।
बिगत २ बर्षयता हेभी इक्विपमेन्टको बजार क्रमिक रुपले घट्दो क्रममै छ । निर्माण व्यवसायीहरुले जुन तबरबाट काम गर्नु पथ्र्यो त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसमा राज्यको अन्योलताले पनि काम गरिरहेको छ । २२ सय प्रोजेक्टहरु हालसम्म पुरा हुन सकिरहेका थिएनन् त्यस्ता प्रोजेक्टहरुको म्याद नथप्ने चर्चा चलेका कारण पनि यो क्षेत्रमा नैरश्यता छाएको थियो । तर भलै १ बर्षका लागि म्याद थप भएको छ । १ करोडभन्दा बढी को प्रोजेक्टमा मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने नियमका कारण पनि मेसिनहरुको कारोबार प्रभाबित भइरहेको थियो । सरकारी अन्योलतका कारण निर्माण व्यवसायीहरु निष्क्रिय भएर बस्न बाध्य भए । काम पुरा भइसकेका प्रोजेक्टहरुको पनि पैसा भुक्तनी नहुँदा समेत समस्या भयो बिकास खर्चका लागि छुट्याइएको ९० प्रतिशत रकम खर्च नै हुन नसकेका कारण पनि बिकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्न सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष मार हेभी इक्विपमेन्टमा समेत पर्न गएको छ ।
टाटा हिटाचीको पछिल्लो बजार अवस्था कस्तो छ ?
सन् २००९ मा व्यवसाय प्रारम्भ गर्दा हामीसँग देखाउनका लागि मेसिन समेत थिएन । हामीले टाटा हिटाचीको ब्रान्ड भ्याल्युका आधारमा, कुनै मेसिनको क्याटालगका आधारमा मात्र पनि ग्राहकलाई मेसिन बेच्न सकेका थियौ । त्यसपछि सोरुम र बिक्री पछिको सेवालाई पनि बढाउदै गएका हौ । यसले गर्दा यो अवस्थामा आइपुग्नु पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो । बजार बढाउदै गएका छौ । ब्यवसाय प्रारम्भ गरेको १० बर्षे अवधीमा हामीले १ हजार भन्दा बढी मेसिन बिक्री गर्न सफल भएका छौ । इन्डस्ट्रि बढ्दा हाम्रो पनि बढीरहेको र घट्दा हाम्रो पनि घटिरहेको अबस्था भएपनि बजार हिस्सा भने हरेक बर्ष बढी नै रहेकै छ ।
हरेक बर्ष बिक्री पछिको सेवालाई बिस्तार गर्दै लगेका छौ । सिप्रदीले जहिल्यै पनि ग्राहक सन्तुष्टिमा पहिलो जोड दिदैं आइरहेको छ । बिक्री पछिको सेवा अन्तर्गत स्पेयर पार्टसको उपलव्धता र दक्ष एबं अनुभबी टेक्निसियनको ब्यवस्था मिलाएका छौ । देशभर १० वटा थ्री एस ब्रान्च बिस्तार गर्न सफल भएका छौ ।
हामीले पछिल्लो समयमा मोबाइल भ्यानको व्यवस्था गरेका छौ । काठमाडौं लगायतका स्थानबाट यसको प्रारम्भ भएको छ । मोबाइल भ्यान भयो भने मेसिन बिग्रेको अवस्थामा तुरुन्तै पुगेर मर्मत गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी फ्रि हेल्थ चेकअप क्याम्प गरिरहेका छौ । हाम्रा मेसिन धेरै भएको स्थानमा गरिने यस्ता चेकअपले मेसिनलाई सधै राम्रो कन्डिसनमा राख्नका लागि सहयोग गरेको हुन्छ । आन्तरिक रुपमा पनि हामीले मेसिन यति बेच्ने भनेर मात्र लक्ष्य तोक्दैनौ । ग्राहकलाई कति घण्टामा सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा बढी केन्द्रीत भएका छौ । ‘कस्टमर सर्भिस रेस्पोन्स टाइम’ लाई कसरी घटाउने भन्नेमा केन्द्रीत छौ ।
देशका दुर्गम स्थानमा समेत टाटा हिटाचीका मेसिन होलान् । यस्तो अवस्थामा सर्भिसिङको लागि कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
हो, सदरमुकामबाट पनि पुग्नका लागि दुई तीन दिन समेत लाग्ने स्थानमा समेत मेसिनहरु पुगेका हुन्छन् । त्यो अवस्थामा सबैभन्दा नजिक भएको स्टेशनबाट सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । देशका बिभिन्न स्थानहरुमा रहेका थ्रीएस (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स) सुबिधा सहितका ब्रान्चबाट सके सम्म छिटो छरितो र प्रभावकारी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छौै ।
पछिल्लो समयमा टाटा हिटाचीका नयाँ उत्पादन पनि आइरहेका छन् । कस्ता खाले मेसिन उपलब्ध भइरहेका छन् र ग्राहकको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
हो हामीले पछिल्लो समय हेभी ड्युटी मेसिनमा बढी जोड दिदै लगेका छौ । जसअनुसरा माइनिङ मेसिनमा फोकस भइरहेका छौ । एस्काभेटरकै कुरा गर्नुपर्दा यसअघि २० टनको बजार ठूलो थियो । हामीले पहिलोपटक जेक्सिस ६५० मोडलको र ४७० मोडलको मेसिन भित्राएका छौ । यी मेसिनको पर्फमेन्स स्टडी भइरहेको छ । यसको उत्पादकत्व हेरेर थप मेसिन भित्राउने तयारी थालेका छौ ।
यसअघि भित्रउदै आइरहेका पुराना मोडललाई समेत अपडेट गरेर ल्याइरहेका छौ । अपडेट भनेपछि जहिले पनि पहिले भन्दा राम्रो हुन्छ । कम्फर्टेबल, पर्फमेन्स र प्रोडक्टिभिटीका हिसाबले यी सबै प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा ग्राहकहरुबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
बजारमा धेरै ब्रान्डका उपकरण उपलब्ध छन् । यो अवस्थामा ग्राहकले टाटा हिटाची नै रोज्नु पर्ने कारण के होला ?
टाटा हिटाचीको एस्काभेटरमा करिब ८० प्रतिशत जापानको हिटाची कम्पनीको पार्ट्स प्रयोग भएको छ । मेसिनको सम्वेदनशील पार्ट्सको रुपमा लिइने पम्प, इन्जिन, हाइड्रोलिक सिष्टम आदि हिटाची कम्पनीकै हुन्छ । यसमा जापानकै प्रविधि र गुणस्तर मापदण्ड प्रयोग गरिएको छ । यसमा सानो क्षमताका डाटा समेत नहराउने गरी जीपीएस सिष्टमको प्रयोग भएको छ । इन्टरनेट नभएको स्थानमा समेत डाटा संकलन गरेर इन्टरनेट भएको स्थानमा पुगेपछि सुरक्षित गरेर राख्छ । देशका विभिन्न स्थानमा भएका मेसिनलाई कार्यालयमै बसेर ट्रयाक गर्न सक्छौ । इन्धन खपत कति भयो ? कति घण्टा काम ग¥यो ? आदि सबै हेर्न सकिन्छ । ग्राहकले आफै पनि यी सबै हेर्न सकिन्छ । यसले गर्दा आफ्नो लगानीमा नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ । काम अनुसार पावर मोड, इकोनोमी मोड र नर्मल मोड प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट इन्धन खपतमा कमी ल्याउन सकिन्छ । चेनको बाक्लोपना, ट्रयाक गार्ड, गहिरोबाट समेत भर्न सकिने फ्युल रिफिलिङ सिष्टम, फ्रन्ट ग्रिल लगाएर आएको क्याबिन आदिका कारण टाटा हिटाचीका मेसिन गुणस्तरीय र सुरक्षित छन् ।
टाटा हिटाचीका मेसिन प्रिमियम र इकोनोमी गरी दुई प्रकारका आउछन् । ज्याक्सिस सिरिज भनेको प्रिमियम र इएक्स सिरिज भनेको इकोनोमिक हो । ग्राहकको चाहना अनुसारका मेसिन हामी उपलब्ध गराउछौ । इकोनोमिकको मूल्य पनि कम हुन्छ र बिक्री पछिको सेवामा पनि कम खर्च हुन्छ । त्यही अनुसार प्रिमियमको भ्याल्यु उच्च हुन्छ ।
नेपालमा हाल प्रिमियम, मिडियम र इकोनोमिक गरी तीन प्रकारका एस्काभेटर उपलब्ध छन् । १० टन, २० टन र ३० टन क्याटागोरीमा उपलब्ध छन् । प्रिमियम र इकोनोमिक अन्तर्गतको सबैभन्दा सुहाउदो मूल्य टाटा हिटाचीको नै छ । हामीसँग मिडियम प्रोडक्ट नै छैन । एउटै सिरिजको मूल्य पनि क्याटागोरी अनुसार फरक हुन्छ । त्यसैले कतिपयले नबुझेर पनि सस्तो वा महंगो भन्ने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । उधारोमा मेसिन दिने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । जसले बढी क्रेडिट दिन सक्यो उसको बिक्री बढी हुने अबस्था छ । जसका कारण हेभी इक्विपमेन्टको समग्र बजारलाई नै असन्तुलन तर्फ धकेलेको छ । बिक्रेताहरुले उधारोमा मेसिन दिन थालेपछि ग्राहकलाई पनि समय बढाएर क्रेडिट माग्ने मनोबल बढेर गएको छ । १० लाख रुपैयाँ छ भने मेसिन पाउँछु भन्ने माइन्ड सेट भएको छ । १ करोडको मेसिन खरिद गर्नुछ भने १० लाख लिएर सोरुम जाने अनि २० प्रतिशत रकम ६ महिनापछि दिन्छु र बाँकी ७० प्रतिशतको डेलीभरी अर्डर ३ महिनापछि बैंकमार्फत दिन्छु भन्ने टाइपको बजार छ अहिले । जुन एकदमै गलत भइरहेको छ ।
लेन मिच्ने पक्राउ गर्न शरीरमा एक्सन क्यामेराजडित टोली खटाइने
चैत ११, काठमाडौं - सडकमा लेन अनुशासन मिच्ने चालकलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरील...
यस्ता छन् बेलाका विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल
काठमाडौं – बढ्दो प्रदूषण र पेटोलियम पदार्थको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ल...
काठमाडौं – कोटेश्वर–जडीबुटीको ट्राफिक जाम समस्या अस्थायी रुपमा समाधा...